WTN Ine Mitsva Yekuchengetedza Mibvunzo yeWorld Travel Market London
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » WTN Ine Mitsva Yekuchengetedza Mibvunzo yeWorld Travel Market London
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • LGBTQ • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Wtn
Pachave neMusika weWorld Travel Market uye chaiyo WTM. Nhasi, World Tourism Network yakasvika kuWTM nemibvunzo miviri yechimbichimbi uye chikumbiro chekuita kuti chikamu cheWorld Travel Market chive chakachengeteka.
COVID-19 uye nyowani AY.4.2 sub-variant vari kutora misoro yenhau muUnited Kingdom, masvondo maviri pamberi pe World Kufamba Musika muLondon.
The World Tourism Network nhasi yaburitsa chimbi chimbi uye mubvunzo wakakosha ku Reed Exhibitions, murongi we World Kufamba Musika.
Nyanzvi dzezvekushanya kubva kutenderera pasirese dziri kutarisirwa kusangana paExcel Exhibition Center Mbudzi 1-3.
World Travel Market muLondon yakachengeteka zvakadii?
World Travel Market yakagadzirira kuratidzira kupasirese kuti zviratidziro zvekutengeserana zvinogoneka, kushanya kuri kudzokera kune zvakajairika, uye mari yekushanya inotarisirwa kuunza chikamu ichi munzira.
MuLondon uye kumwe kuUnited Kingdom, mabhawa nemaresitorendi, pamwe nenzvimbo dzezviitiko zvakavhurwa. Kupfeka mamask hazvidiwe kunze kwekufambisa kwevanhu. Mitengo yehotera iri pakakwirira kwazvo, uye vashanyi vari kudzoka.
Panguva imwecheteyo, United Kingdom yakanyorera nezuro 49,139 nyowani dze COVID-19 kesi uye 179 kufa. Zvinoenderana na areport pane CNBC, vanachiremba veku UK vari kudaidzira kuti vadzose zvirambidzo kuEngland. Hutachiona hutsva hwakaonekwa neUK hwatonyanya kutapukira.
Nyika yekushanya kwepasirese haigone kumirira kusangana nekubata maoko neshamwari dzekare paWTM iri kuuya. Chinyorwa chino mubatanidzwa wenhau weWorld Travel Market uye Muparidzi, Juergen Steinmetz, ari kurongedza bhegi rake.
Saudi Arabia chete vhiki ino yakasimbisa kudyidzana kwayo semutsigiri mukuru we World Kufamba Musika kuitika paExcel Exhibition Center muLondon kubva munaNovember 1-3 mwedzi unouya.
Iyo 3-zuva WTM ajenda izere nezviitiko nemisangano. WTM 2021 ndiyo yekutanga yechokwadi kuratidzwa kwepasirese kwekuratidzira kubvira pakatanga COVID-19 uye kubviswa kwakashata kweITB Berlin mu2020.
Kukanzura World Travel Market London paminiti yekupedzisira ikozvino kwaizonyanya kukonzeresa kuora mwoyo uye kuvhunduka kutenderera pasirese. Izvo zvakakosha kuti WTM iitike kuitira kudzoreredza kunodiwa kwechikamu.
Nhasi, World Tourism Network Mutungamiri uye nyanzvi yekuchengetedzwa kwekufamba, Dr. Peter Tarlow, vakamutsa mibvunzo miviri inokosha uye zvinonetsa. Dr. Tarlow achavewo mutauri pachikamu chaicho cheWorld Travel Market.
Hezvino izvo izvo vashanyi vanogona kuwana pane iyo WTM webhusaiti maererano nezve kuchengetedzeka uye chengetedzo panguva yechiitiko.
Kuchengetedza matanho ekupinda World Travel Market
WTM inoti pane webhusaiti yayo: Kuchengetedzeka kwako uye bhizinesi rako ndizvo zvatinokoshesa. PaWTM London, unogona kuva nechivimbo chekuti vese vari mumaoko akachengeteka. Zvakare nekunyatsotevera kuraira kwazvino uye nhungamiro, tiri kushanda nevakuru venzvimbo uye pasi pemaitiro edu akasimba ekuisa matanho matsva ekuunza chiitiko chakachengeteka chekuti usangane, udzidze uye uite bhizinesi.
Izvi zvinoreva kuti chiitiko chedu chinotaridzika zvakati siyanei gore rino, asi shanduko idzi dzinokutendera kuti unakirwe neruzivo apo uchizvichengeta iwe, nevamwe, makachengeteka.
Vese vachapinda vachada kuratidza humbowo hweCOVID-19 chimiro kuti vapinde muchiitiko chedu. Pakusvika iwe uchafanirwa kuratidza chinyorwa, email, kana kupasa kuti uone mamiriro ako eCOVID ndeimwe yeinotevera:
Uchapupu hwekupedzwa kwechirongwa chakazara chekudzivirira mavhiki maviri asati asvika.
Humbowo hweiyo negative lateral Flow Test kana PCR mhedzisiro yakatorwa mukati memaawa makumi mana nemasere ekusvika.
Uchapupu hwekuzvidzivirira kwepanyama kunoratidzwa neyakajeka PCR bvunzo mhedzisiro yeCOVID-19, inogara kwemazuva zana nemakumi masere kubva pazuva rekuyedzwa kwakanaka uye zvichitevera kupera kwenguva yekuzvisarudzira.
Vanopinda vachakumbirwawo kuti vatarise zuva rega rega kuburikidza nenzvimbo yeNHS Test & Trace QR kodhi. Ndokumbira utarise kuti hapana machira ebvunzo ekupedzisira ekuyerera kana makadhi ekudzivirira emuviri achagamuchirwa seumbowo hunoshanda hwemamiriro. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve COVID inopfuura, tinya pano.
Reed Expo, murongi weWorld Travel Market, WTM, anoudza vashanyi:
WTM: Tinokurudzira zvakasimba kuti iwe upfeke kumeso kumeso kana iwe uri munzvimbo dzemukati nevanhu vausingazombosangana navo.
“Musika weWorld Travel Market semuratidziro wepasirese wekufamba wekutengeserana urikumisa mafambiro kwete echiitiko chayo chete asi chepasirese. Kubvumidza vatori vechikamu kutora chikamu pasina mask hakuzongove kunetsekana kweWTM chete, asi zvinozotumira meseji isiriyo panguva dzino dzisati dzanyatsogadzikana, "akadaro Juergen Steinmetz, Sachigaro weWorld Tourism Network.
WTN: Iyo World Tourism Network iri kukurudzira Reed kuti aenderere mberi mukuita masks echiso anosungirwa chiitiko. Aya ndiwo maitiro akajairwa pazviitiko zvakawanda zvemukati pasirese. Zvingave zvisina basa kuti WTM ibvumidze vaipinda vayo kuti vazvisarudzire ivo pachavo kupfeka masiki.
WTN iri kujekesa kana ichiratidza kuti vese vashanyi vanofanirwa kubayiwa jekiseni. Izvi zvinodikanwa kune iri kuuya IMEX America muLas Vegas, Mbudzi 9-11.
Reed Expo, murongi weWorld Travel Market, WTM, inovimbisa vashanyi:
WTM: Kufefetedza paEXCEL Exhibition Center kuchawedzerwa, kunatsiridza kutenderera kwemhepo nyowani zvinoenderana neazvino nhungamiro.
WTN: World Tourism Network iri kukurudzira EXCEL Exhibition Center kuti iite chidzidzo nekukasira, uye vagovane mhedzisiro yekuti inoshanda sei nzira yekufefetera inopesana neese akasiyanaAnti dze COVID-19 kusanganisira yazvino uye ichangoonekwa. AY.4.2 sub-musiyano.
Iyi coronavirus offshoot yemusiyano weDelta parizvino iri kupararira nekukurumidza muUnited Kingdom uye yakapihwa huwandu hwe10-15 muzana kutapukira kupfuura "mubereki" wayo izvo zvino anotonga hutachiona hweCovid-19 pasi rese.
Vesainzi vari kudzidza iyi AY.4.2 sub-variant, asi musafunge kuti ichave njodzi kuUK. Zvakangofanana, iri padanho rayo repamusoro kubva muna Chikunguru.
Kunze kweUK, iyi subtype inoramba "isingawanike" iine 2 chete madhiri anowanikwa muUS kusvika parizvino.
nhasi, Morocco yakatovhara miganhu yayo kuUK, zvichiita kuti ive nyika yekutanga kutangazve kurambidza kwakanyanya kufamba kuBritain.
MunaGunyana gore rino, European Medicines Agency (EMA) yakazivisa musiyano wecoronavirus unozivikanwa sa “Mu” uyo ungangodaro uri chikonzero chekunetseka.
Mumavhiki maviri apfuura, United Kingdom yakataura dzakawanda nyowani dzeCCIDID-2 kupfuura France, Germany, Italy, neSpain zvakasanganiswa.